10/11/2008: Submitted for publication via web
"Alliwa": Wargeys 50 Guuradiisii Ay Maanta Tahay - Kowaad
Da'ahan danbe waxay u baahan yihiin in ay taariikhda saxaafada Somaliland wax ka ogaadaan. Qoraalkan, inkasta oon ku xusayo, wargeyskii la odhan jiray Alliwa oo ay maanta kasoo wareegtay, 50 sano, maalintii tirsigii (cadadkii) ugu horeeyay soo baxay, ahaydna maalin Jimca ah, 24-kii October 1958, waan taataaban donaa taariikhda saxaafada Somaliland, anoo rajeynaya in qoraalkani, uu jidka baadhista u iftiimiyo, qofkii hawshaa u anbabaxa. Qorshaha in wargeyskani soo baxo, dhowr sano ayuu socday. Waxaa loo soo tababaray dadkii wax ka qori lahaa wargeyskaa. Waxaa la soo tababaray dadkii xuruufta qaabka loo habeeyo ka hawlgeli lahaa. Madbacadii baa la keenay farsamo yaqaankeedii iyo wixii qalab ay ku hawlgalilahayd oo dhan. Horseed Printing Press ayuu madbacada magaceedu ahaa. Madbacad ganacsi oo shariikad gaar ahi leedahay ayey ahayd. Sharikadaa waxaa wada lahaa C/Laahi Oomaar oo maanta nool iyo Ibraahim Guuleed iyo Axmed Jimcaale oo labadaba Illaahay oofsaday naxariistii janno haka waraabiyee. Madbacad Somaliland la keeno oo ganacsi madax banaan, ka bilowda Somaliland tii ugu horeysay ayey ahayd. Intaan wargeysku soo bixin, muddo ayey shaqeyneysay.
Magaaladu waa Hargeysa. Madashuna waa Cinima Hargeysa oo ahaa halka immika uu ku yaal N.Hotel ooy immika ay leeyihiin Ilmo Yey Cabdi Ibraahim Alla ha naxariistee.(Milligu) time waa markii salaada Casar laga soo baxay. Waa Jimce 24-kii October 1958 sidaan hore usoo sheegay. Waa xafladdii lagu gardaadinayey tirsigii (cadadkii), ugu horeeyay ee wargeyska Alliwa. Wargeyskaasi wuxuu ahaa wargeys madax banaan oo Somaliland gudaheeda lagu daabaco kii ugu horeeyay. Af Carabi buu ku soo bixi jirrey. Sababtu waxay ahayd, Afsoomaaligu markaa ma qoreyn, dadka englishka yaqaanana waxaa ka badnaa inta Af carabi taqaan . Intii aaney bilaabmin waxbarashada cusub oo carabidu xooganeyd oo lana sineyd barashada Ingiriisida, afka wax lagu bartaa carabigga ayuu ahaan jirrey. Afka ganacsiguna carabi buu ahaan jirrey. Sidaasaa loo go'aamiyey in wargeyskaasi afcarabi ku soo baxo.
Mawduuca, waxoogaa aanka baxo aniga oo afcarabigu doorkuu ku lahaa nolosheena laan kale tilmaamaya. Waa masraxa. Sidaan ka wariyey Alla ha u naxariistee Nasir Naxar, riwaayad Somaliland laga matilo, waxaa ugu horeysay, "Al-xajaaj Ibni Yuusuf ". Boorame ayaa riwaayadaa laga matiley. Riwaayadaa Afcarabi baa lagu matilay badhtameeyihii 40-aadkii ayuu Marxuum Yuusuf Xaaji Aadan bilaabay in uu soo saaro riwaayadii lo odhan jirey, "Al-Ab-U-Jahil " oo iskugu jirtey Afcarabi iyo Soomaali. Waxaa xigtay, Amiirul imtiqaam "Islaamu Cumar" . "Qays- Wa-Leyla". Giddi waxaa soo saare ka ahaa Marxuum Yuusuf Xaaji Aadan. Afcarabigu sidaas buu u ahaa Afka masraxa tan iyo bartamihii 50-aadkii, markii ay waalaalo Hargeysa calankii masraxa Somaliland gacanta ku dhiggeen. Masraxa Somalilandna Carabi bey ku bilaabatay.
Alliwa sidaan xasuusto waxay lahayd amba ay u qeybsaneyd dhawr Irdood "Ereygayaga" oo ahaa maqaal joogta ah oo bogga hore ku soo baxa iyo "Alliwaa Taquul", wargeyska ayaa Alliwa waxay tidhi oo sawiraayey ama gudbinaayey fikirka wargeyska ayaa astaan u ahaa. Bogga ardayga, Bogga haweenka Qara'tu Laka (waxaan kuu soo akhriyey) oo buug fallanqeyn jirrey, Mimberka Gabayga (mimber ul shicir) qoraalada akhristaha Khawaadiru ul-Usbuuc (Dreemada 7-aadka) iyo warar wixii laga haleelo ayaa kusoo bixi jirray Alliwaa. Qeybahaa iyo bogogaa aan soo taxay, 7-aadba midbaa ku soo bixi jirrey wergeyska. Labada maqaal ee gudbinaaya fikirka wargeyska, qoraalada akhristaha iyo dareemada 7-aadka ayaa joogto usoo bixi jirrey todobaad walba "Hamasaad"(dhuxdhux ) oo aan ka badneyn dhowr sadar ayaa iyana marmar ku soo bixi jirtey wargeyska oo daaranayd waxan immika loo yaqaan "Gossip" Dadkuna aad u daneyn jirrey.